Exchange Platform cutter Fiber Laser Ịcha Machine OR-E - China Shandong Oree Laser
Exchange ikpo okwu eriri ọnwụ igwe nwere ike bee ọtụtụ ndị metal Ibé akwụkwọ, karịsịa ya exchange ikpo okwu nwere ike ịzọpụta ihe karịrị 50% nke ohere na-eri tụnyere ndị ọzọ, N'otu oge, nwere ike isi nweta elu ọnwụ nkenke na arụmọrụ. Ọ dị mfe n'ihi na ọrụ na-arụ ọrụ ma na-enwe. N'otu oge ahụ, na-echesinụ nzukọ usoro ana achi achi anụ ọrụ nke igwe na elu kpọmkwem. Ngwa anya eriri laser ọnwụ igwe na-enye ọrụ na ike ọnwụ ike na arụmọrụ na dị n'elu-ọkwa ngwa.
EXCHANGE Platform cutter eriri laser ọnwụ igwe OR-E
Yaskawa Electric bụ ọkachamara emeputa na ubi nke ngagharị akara. Ọ bụ nke mbụ ụlọ ọrụ dị na Japan na-a servo moto. Ya na ngwaahịa na-mara ha kwụsie ike na-agba, na ha na-eri-irè. Ha bụ ndị kasị ibu n'ụwa ahịa na kasị eji servo ụdị na ụlọ ọrụ. Na China, Yaskawa ka nwere ndị kasị ibu ahịa òkè ruo ọtụtụ afọ.
Repositioning Accuracy ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.03 mm
Nke ziri ezi na nke n'ọnọdu ± 0,02 mm ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Previous: Oche Isiokwu eriri laser akara igwe RT
Osote: Elu ike eriri laser ọnwụ igwe OR-H
Sọrọ-eji mpempe akwụkwọ & tube eriri laser ọnwụ ...